Izinwele ze-Afro Curly: Iimpawu zeeNwele, iiMveliso eziKhetele kunye nemiGudu ye-2020?
Izinwele zaseAfro ezinwele okanye ukuba afro curly kukhangeleka ngokukhawuleza ekuthandeni! Ukususela ekuqalekeni kweenwele zemvelo ukubuyisela emuva kwi-2007, yonke injongo yendalo yemvelo yenzelwe ukufika apho iinwele zinkulu kwaye zilungelelanise! Ngako oko uvumelanisa i-curly afro kuyo yonke inkazimulo! Izinwele ze-Afro ezibukiweyo zincinci zendalo zineendwangu ezintle okanye i-sphere shape ekhulayo iphinde ihambe njenge-afro yendabuko, kodwa ibonakala ngathi yindawo ebonakalayo. Amanye ama-naturals afana nokuloba i-curly afro entliziyweni esikhundleni se-afro, kwaye loo nto ihle kakhulu.
1 Iimbobo zeeNwele kunye neeMathandle eziDumile
1.1 INDLELA YOKUTHETHA I-AFRO YOKUPHATHA KWE-AFRO YOKUBUKA: ilitye elincinci!
2 Indlela Yokwenzela Ngayo Intlungu Yemizimba Yesiqhelo?
3 UKUKHALWA KWE-CLIP-INS
4 UKWENZEKA KWABANTU BAMANZI & Wigs
4.0.1 HACK HACK HACK!
4.0.2 Ndiyathemba ukuba oku kuncedo. Kude ixesha elizayo sis!
Iimbobo zeeNwele kunye neeMathandle eziDumile
Izinwele ze-Afro ezibukhali zisoloko zixhomekeke ekufuneka kuthathe iminyaka ukukhula uhlobo lweenwele ze-4. Nangona kunjalo, ngokuqhubela phambili kwintsuku, i-clip-ins kunye nezandiso zeenwele zekinky, eli jongeka alizange libe lendalo ngokwemvelo. Akunakukuphela nje ukuhamba ngokufutshane ukuya kwi-XMUMX imizuzu emfutshane, kodwa akunandaba nokuba uluhlaza obunjani. Uyakwazi ukukhangela i-Afro Curly ijonge kunye nezandiso. Ukuba sele usenokwenyama, ndincoma ukufaka i-clip ye-ins. Fumana i-clip ye-clip edibanisa kakuhle kunye neenwele zakho zangokwenyani ngenxa yokuba unokwenza ngokulula imodeli ye-curl nge-twist okanye i-Bantu knots, endiya kuyichaza emva koko. Ukuba unemodeli ye-curl ekhululekile njenge-10a 3b, kuya kuba nzima ukwenza i-curly afro ibheke ngaphandle kokuba iinwele zakho zifutshane. Kuwe i-divas, ndincoma i-crew yendlala kunye kunye ukuvalwa. Okanye umgca wethu omfutshane we-Nubian line. Umzekelo omhle wekhefu ongawusebenzisa uya kuba yiKinky Curly, Coily okanye i-Afro Kinky iqokelelo njengoko ezi ziza kubonelela ngeyona ndlela ifanelekileyo ye-Afro Curly!
INDLELA YOKUTHETHA I-AFRO YOKUPHATHA KWE-AFRO YOKUBUKA: ilitye elincinci!
Indlela enkulu yokufezekisa i-Afro ekhangeleka kakhulu i-Afro kukulandela ezi ngcebiso ezilula. Into ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele xa ubumba ukujonga kwakho kukukhumbula ukuba umonde ubuhle. Ukunyuka kweenwele zakho kuthatha ixesha (ininzi kunye nexesha eliningi LOL) nangona kunjalo ndiya kukuvumela kwiimfihlelo ezimbalwa zokuzifakela uze uyenze! Masiqalise
Indlela Yokwenzela Ngayo Intlungu Yemizimba Yesiqhelo?
Ukuba iinwele zakho zendalo zide kwaye zanele ngokwaneleyo, le ndlela ayinakuyenza. Usuvele unayo i-3c okanye i-4a imifanekiso engokwemvelo kunokuba uhlambe kwaye uhamba uya kuba nokwanele ukuphumeza loo ndlela. Nangona kunjalo, ukuba unayo 4b 4c iinwele, ngoko kunokuba nzima ukufumana ukuba i-afro ibukeka kakuhle. Endaweni yoko, kuya kufuneka uyenze okanye uphumele ngaphandle okanye amaBantu amaqhosha ukuze usebenzise umzekelo wakho wekhalenda.
Kukho imfundiso yevidiyo ebonisa indlela yokufaka afro kinky curly clip ins kule khasi ukudala ubude obuphakathi kwendawo engezantsi!
Olu luphawu lwesimilo luye lwafunwa emva kwe-due ukuya ekuthandweni kwayo kwandlela-thile kwiindawo zase-Afrika zaseMerika.
Ukuba awunalo ubukhulu okanye ubude ukukhupha i-curly afro, ngoko unokuhlala usebenzisa i-clip ye-ins. Fumana izandiso zemvelo ezidibeneyo zakho ngokwenene ubunwele beenwele, oko kubaluleke kakhulu; Ngenye indlela, iinwele zakho aziyikudibanisa kakuhle. Ndiyincoma ukuba ubude obude ukuba iinwele zize zenze i-dome effect. I-10 "okanye i-12" isebenza kakuhle kwaye uya kuyidinga i-1.5-2 iisethi zevidiyo. Faka isicelo kwi-clip ye-ins kuzo zonke iinwele zakho. Ngoku ixesha layo kwisitayela kwaye ubume iinwele. Ukufumana i-curly look you will need to move the hair or create Bantu knots iifom ze-bouncy curls. Ukukhawuleza okumanzi ngokukhawuleza, kwaye kulula ukuyisebenzisa iziqeshana ebusuku, uphazamise iinwele kwaye ungabonakali ngaloo ntsasa. Nangona kunjalo, ama-bantu ama-knots akha i-best curly afro. Ukwehla malunga nokwenza i-Bantu knot ngaphandle kukuba kuthatha ixesha elizeleyo ukuba lome ukuze uhlale phantsi kwe-dryer hood. Into ebalulekileyo ekuqwalaseleni xa uzama ukufumana i-nice twist out ukukhusela ama-creams enzima. Oku kuqinisekisa ukuba unciphise ukuphazamiseka kwaye uvumele ukuba iinwele zakho ze-Afro zikhawuleze ukuba zikwazi ukulawula ngakumbi.
UKWENZEKA KWABANTU BAMANZI & Wigs
Indlela elula neyona ndlela ilula kakhulu yokufumana i-afro curly look is to use wigs! Ungakwazi ukufezekisa nayiphi na isitayela, umbala, umlo, kunye nekhraylethi engqambileyo oyifunayo ngomgudu omncinci ngokulula ukufaka i-wro kinky curly curly ifowuni efana nale!
Ndiyincoma ukuzama i-Short Nubian Coily Wig Unako ukuma nokucacisa iindwangu ngendlela efanayo oya kwenza izandiso ezifana nokusebenzisa afro kinky izinwele. Uyakwazi ukuhlamba kunye nokuhamba kunye nesimo sokubhala njengendlela yokuphuma kunye ne-Bantu knot outs okanye ukufaka iinwele ze-afro crochet.
Ufanele uqeqeshe iinwele zakho ukuze zikwazi ukulawulwa ngakumbi ngexesha lonke lehlabathi. Nangona kunjalo, eli hlotyeni, kuyacaca ukuba isitayela sokukhusela sinokuthi sibe yindlela ehamba phambili. Nangona oku kunjalo, sonke siyakuthanda ukubonisa i-kinky curly yethu ukucima! Ngubani ofuna isitayela sokukhusela lonke ixesha ??? Ukuba uya kugubha iinwele zakho ze-Afro Curly okanye ulungelelanisa kule hlobo lehlobo, qiniseka ukuba ugcina iziphumo zakho ziphefumle.
Ukusebenzisa ukukhetha impawu kunokuhamba ngendlela ende. Masijongane nayo, ukuthabatha iinwele zakho kunokuba udaka, ngakumbi ukuba lomekile okanye ungasetyenziswanga. Nangona kunjalo, ngexabiso elifanelekileyo lokuvumelana, ngokuqhelekileyo uqala ukuzinzileyo ngakumbi ukuba ukhululeke kakhulu kwisitayela nangona uhamba. Nangona kunjalo, sincoma ukusebenzisa i-leave-in conditioner efanelana kakuhle nekhanelo yakho ye-curl kwaye ikhetha kuphela ingcambu. Khangela ngobumnene ukusuka kwingcambu uze uphakamise. Oku kuya kudala ivolumu eninzi kwaye kuncede iinwele zakho zime ukuze zikhangele i-afro look! Ukuba iinwele zakho zincinci uya kufumana i-afro i-curly frost ngokususa iinwele zakho ngokucokisekileyo kwiingcambu ukuya phakathi kweentloko zakho zeenwele emva kokuba uphumele ngaphandle okanye i-Bantu knot ngaphandle!
Ndiyathemba ukuba oku kuncedo. Kude ixesha elizayo sis!
Iimveliso zokunakekelwa kweetayari eziphezulu kubantu abaMnyama
Indlela yokuguqula iinwele zeKinky Ukunyuka kweenwele
Ucinga ngokuhamba nge-blonde? Nazi ezinye izicwangciso!